ABAYIWA NGAABUDE - CHISHONA
“Ndati kana wasvotwa buda uende kumba kwenyu, uri murume rudzii anoda kuchengetwa nomukadzi!” apaumba Rodha akamira padhuze nechitofu muimba yavairoja mumusha weRugare uri padyo neKambuzuma muguta reHarare.
Chamu haana zvaakakwanisa kupindura mushure mokunge ataurirwa magaramoyo aya nomudzimai wake wamakore makumi maviri namashanu.
Vachangobva mukuroorana vaviri ava vakaita muchato wakaita mutinhimira mumusha weKambuzuma maigara vabereki vavo.
Vakazotama pamba pavabereki vaChamu vave kuenda kunogara mumba dzenhurikidzwa dziri munaJosia Tongogora mukati meguta reHarare.Chamu akange ari chamangwiza pakambani yaibika chingwa kuMasasa, uyuwo mudzimai wake aive mukoti pachipatara cheParirenyatwa. Hapana chavaishuvira muupenyu hwavo chavasina kuita. Upenyu hwavo waive mutserendende mvura yeguvi.
Mhuri iyi yaiyemurwa chaizvo nevoruzhinji mumusha weKambuzuma. Dambudziko rakazovepo pakamiswa Chamu basa nenyaya yemari yakange yashaikwa pabasa. Varidzi vekambani havana kuda kumusungisa nokuti akabvuma mhosva yake pamwe nokudzorera mari yakange yashaikwa.
Nokudaro mudzimai ndiye akange ave kuriritira mhuri. Chamu akaedza nepaikwanisa kutsvaga basa zvichiramba. Vaona kuti vakange vasisakwanise kubhadhara mari yokugara muflat vakabva vatsvaga imba yokuroja yaive nemutengo uri nani kuRugare.
“Izvozvi wakangoti undundu ipapo uchitadza kumukira kunotsvaga basa kumaindustry nevamwe. Unofunga ndicharamba ndichichengeta iwe nevana vako kusvika rini? Vamwe varume ndosaka muchitsvagirwa zvikomba navakadzi nokuti hamufungi!” adaro Rhodha nenzwi riri pamusorosoro uye achiratidza kusemeswa nechiso chomurume wake.
“Iwe wave kuda kufarisa nhaika! Imbozviedza uone marovero andinokuita,” Chamu akapindura nenzwi rinehasha.
“Manje mira uone kuti ndichakugadzirira size yako chaiyo!” asati apedza muromo uyu Rhodha akagadzikwa ganyamuto mbama inodzipura nenyama.
Mukadzi haana kumirira kuti murume wake amusvitse imwe mbama achibva anhonga poto. Akaipotsera yakananga kuna Chamu uyo akabva aivhika ndokubva yasvikonopwanya fafitera rewadhiropu. Zvibhakera zvakachitanga kunaya. Rhodhawo aiti kana atsamwa aiita rimwe simba rokuti waifunga kuti asvikirwa.Vaviri vakaumburudzana kusvika varidzi vemba vazomhanya kuzovanunudza.
Zvose izvi zvaive mumaziso evana vavo vaviri vaidzidza paKambuzuma Primary School. Vana vairatidza kushushikana nemagariro akange ave kuita vabereki vavo. Zuva nezuva aingove mapope chete. Mufaro wavaiziva pavaigara kumaflats wakange usisipo.
“Manje inzwai vanangu, ini handigoni kugara navanhu vanogara vachirwa. Iyezvino tarisai kuti vanhu vazara panze nokuda kwemhere-mhere yenyu,” vakadaro Mai Mutoti, muridzi wemba yaigara Chamu nemhuri yake.
“Mwedzi uno uchipera ndinofunga zvinenge zvakanaka kuti mutsvage kwokugara.Pamba pangu hapazi peboxing. Munoitirei zvinonyadzisa kudai, hamunyari vana venyu makaita sei?” yakapopota chembere.
“Ini amai mufunge Mai Loice ndivo vanondidenha. Dambudziko ringoripo nderokuti handisi kushanda. Anondiudza kuti ndichakutsvagira chikomba kuti ungware, munoti kutaura kwomudzimai akarairwa ikoko?” akadaro Chamu.
Mai Mutoti vakaviruka nehasha vakatarisa Mai Loice vakange vari kutova ziso ravo rakange ratsvuka kunge chiropa.
“Uri mukadzi akakwana here iwe unotaura mashoko anosemesa kudaro kumurume wako? Manje zvechipfambi pano pamba pangu handidi zvangu kana kuzvinzwa.Kana wapindwa nomweya wadhiabhorisi wosunga twako uende.Baba Loice ndinomuchengeta pano kusvika awana basa.Uri mukadzi wepi anotaura zvakawora kudaro? Inga ndimi munozviti vakuru vamadzimai eruwadzano?” vakapopota mai Mutoti.
“Ndiye anenge anditanga, anofunga kuti ndinomuchegeta kusvika rinhi? Ngaaende anotsvaga basa nevamwe, haamborishayi inga chikoro chake anacho wani. Kubasa uko ndinogarosekwa navamwe vangu kuti unoriitisei rovha,” Mai Loice vakapindura maziso avo azara misodzi yehasha.Vaiti vakatarisa Chamu vainzwa hasha dzavo dzichiwedzera zvokuti kana kumuuraya chaiko zvaikodzera kwavari.
“Izvozvi ndinoenda sei kubasa, ziso rangu rakazvimba kudai. Ndikadzingwa basa racho tinoita sei nevana ava?” akabvunza mai Loice.
“Mukateedzera zvamunonyeperana kumabasa uko, hamuvaki misha vasikana,” vakadaro mai Mutoti.
“Aiwa amai kana ashaya basa ngaaende kumusha kunababa vake anofudza nguruve. Ini handingazvigoni zvokugara nerovha risina chimuko.Harare yakazara nevarume vanemari vanototsvaga vakadzi vokuchengeta, kwete anaChamu vanomirira kuitirwa zvese nomukadzai,” akapaumba amai Loice.
“Amai mufunge regedzai ndikubudirei pachena.Mukadzi uyu anondiitira zvakawanda zvinorwadza.Kutaura kuno ave nemwedzi mina achirara pasofa ini ndichirara ndega, vana vanofungei nazvo? Kusvondo kwaaisienda ndinofunga iyezvino atove nemwedzi mitanhatu asingaendi, hameno kuti apindwa nei chaizvo?”Chamu akabvunza.
“Shamwari zviri nani kurara ndega panekurara nerovha risina chimuko ndigopedzisira ndaita umwe mwana futi.Ungatozviti uri murume here pauri ipapo?” Mai Loice akataura nenzwi riri pamusorosoro. Mwana womuera Shava aiti kana atanga kupenga hapana chaisara. Aiita kupupa furo nehasha. Kuzvipedza kwaitongove kunyarara kusvika apedza shungu dzake.
Ambuya Mutoti vakange vagara navanhu vakasiyana-siyana pamba pavo. Chembere iyi yaive nyanzvi zvikuru panyaya yokuyananisa mhuri. Vakaedza pavagona napo kuyananisa vaviri ava kusvika vazodzokera mumba mavo. Asi kuna Rhodha hasha dzake dzakanga dzisati dzaserera.
“Iri sadza randiri kubika nderangu nevana vangu.Iwe hameno pamwe uchasiirwa chikafu namai Mutoti vako, kana kuti woenda kuKambuzuma kuna mai vako.Ini handikwanise kukufidha pano.Magumbeze angu auri kufuga ubve wasiyana nawo, wofuga kamutabvunda kako kawakabva nako kumba kwenyu,” akapaumba Rhodha.
Akaenderera mberi achiti, “Usafe wakazvifungidzira kuti ndichiri mukadzi wako. Enda unotsvaga chako chigezanemugovera kumusha muite mhuri yenyu ikoko”.
“Rhodha unoyeuka here kuti ndini ndakaita kuti uve zvauri. Ndini ndaikupa mari yokuti uende kuchikoro asi nhasi wave kundiona serombe chairo,” akapindura Chamu, akagara pakona yomubhedha.
“Shamwari mari yako imbori mariiko yaungatoda kushamisira nayo. Nditaurire kuti imarii ndikupe! Handikwanise kugara nemunhu asingashandi ini,” Rhodha akapindura.
“Iwe handidi munhu anoda kushamisira, nokuti uchazoshamisika manjemanje ndakurova futi,” Chamu akapindura.
“Unorova wako wawakazvara.Dai ndisina kuzobatwa namai Mutoti nhasi ndanga ndichida kukupinza chikoro chokuti vamwe vakadzi vanorova shamwari!” mudzamai akapindura.
Pakarepo kamwana kavo kadiki kakabva kapinda mumba mavaitukana vari kachifemereka.
“Mhamha ndipeiwo mari yeyorghut!”
“Iwe mhamha, mhamha kuita sei? Taurira baba vako vakangoti udzvu maziso apo kuti vakupe mari iyoyo. Unofunga kuti ndinotambira nengoro here ini? Iyezvino ndini ndiri kubhadhara zvinhu zvese pamba pano, buda panze apo! Chakafanana nababa vanongorembedza maziromo zvisina maturo,” akaenderera mberi mwana womuera Shava.
“Iwe haikona kutuka mwana zvakadaro mhani! Kana usina mari unongoti handina bedzi, kwete kuswerotuka mwana zvakadaro,” akadaro Chamu.
“Manje Chamu mira ndikutaurire.Kubvira mangwana vana vangu ndiri kuenda navo kumba kwaamai vangu. Imba ino yandiri kubhadhara mari ndinosiya ndakiya, saka motoona kuti mangwanani six oclock padzinokwana munenge mapedza kugeza, mobuda muno hameno kwamunonoswera. Iniwo handizivi kuti kubasa ndinenge ndichipedzawo nguvai?” akadaro mai Loice.
Ave mangwana acho Rhodha akamuka achibva atanga kurongedza mbatya dzavana vake. Chamu akafunga kuti zvimwe kwaive kutamba asi akatozviona kuti Rhodha akanga asiri kudzokera kumashure pane zvaakange ataura.
“Imi mukai mugeze ndave kuda kukiya imba yangu.Kana muchida zvokuswera makarara endai kuHarare Gardens havabhadharise, munononyatsorara pamadiro.Itai tibude isu vokumabasa tinganonoke, hameno kuti kwenyu kumarovha munotanga nguvai?” Rhodha akataura zvokusvotesa achipedzisa kupfeka nyufomu yake youkoti.
Chamu akazvibata nokuti aiziva kuti akapindura vaizopedzisira varwisana zvekare. Akatora juzi rake ndokutanga kufamba, akapfuura napachipatara cheHarare akananga kuindustry. Akanomirawo nevamwe vaitsvaga basa, asi zuva iri hapana chakaitika. Ave kudzoka akapfuura nepazvitoro zvepaMoja achifunga kuti aigona kuwana munhu wokuziva kuti amutengerewo kana maputi chaiwo sezvo akange anzwa nenzara, asi haana waakaziva. Rakange rave zuva rechipiri asina chaakange ambokanda mumukanwa kunze kwemvura.
Akadzokera nenzira yaakange abva nayo ndokuzosvika kuRugare kwatosviba. Akasvika pamba ndokuona pakakiyiwa. Akabvunza vazukuru vamai Mutoti kuti mudzimai wake akange adzoka kubasa here achibva atambidzwa katsamba kakange kasiyirwa vana ava.
I’m out for the night saka tsvaga kwaunganorara.
Pakange pasisina zvokuita, nokudaro Chamu akabva atanga kukanda tsoka akananga kumba kwavabereki vake kuKambuzuma.
Paakasvika akawana amai vake vari kutopakura sadza.
“Titambire Unendoro, kwakanaka here kufamba nousiku hwakadai,” vakabvunza amai vaChamu.
“Kwakanaka hako, asi hamudi kushanyirwa here?” mukomana akapindura.
“Aiwa ndinoziva kuti une mutemo wokuti haufambi usiku.Kwenyu kuRugare uku kune mbiri yokupondwa vanhu.Akadii mudzimai navana?” amai vakabvunza mwana wavo.
“Vari nani zvavo,” Chamu akapindura nenzwi riri pasi-pasi.
Chisina kuzivikanwa naChamu ndechokuti amai vake vakange vatozviona kuti pane zvakange zviri kushungurudza mwana wavo.Havana kuda kumumhanyirira kusvika vapedza kudya sadza.
“Unendoro ndinoda kuti munditaurire kuti chii chiri kunetsa.Muviri wako hausiwo wandinoziva.Chii chaizvo chauri kufunga?Waonda zvokuti vanhu vese mumaraini vave kutofungira kuti pamwe unechirwere.Zvino kana uri kurwara mwanangu mazuvano hazvinetsi, vanhu vave kungopiwa mapiritsi mahara.Ndini mai vako hapana chaungandivanzire,” vakadaro amai vaChamu.
Chamu zvakada kumbomuremera kuti ataurire amai vake zvaiva kutsi kwemwoyo wake, asi akazviona kuti mwana asingacheme anofira mumbereko.
“Mufunge amai kwamakore maviri andaregedza basa handisi kugara zvakanaka nomudzimai.Mai vaLoice vanondinyomba pazere vanhu pamwe nevana, anogarondishungurudza nguva nenguva, chikafu chaicho dzimwe nguva haandisiire uye anogarofonerana navarume vandisinganzwisisi.Iyezvino ndawana akiya misuwo yese yepamba ndokubva anyora chitsamba ichi,” akadaro achitambidza amai vake tsamba yaRhodha.
“A-a-a!Inga aya ndiwo madambi chaiwo.Ndiye here chaiye Rhodha wawakachata naye uyu, ukamuendesa kuchikoro?Nhasi avekukubata neseri kweruoko nokuti wasauka nhai?Chete mwanangu, matambudziko avarume vari kushungurudzwa navakadzi mudzimba awanda chaizvo mazuvano.Dambudziko ramuinaro varume vazhinji nderokuti mune kakuvanziridza kamuinako, hamudi kutaura zvinokunetsai kuti mubatsirwe.Vazhinji venyu munozopedzisira mazvisungirira nokuti hamudi kutsvaga rubatsiro nguva iripo.Handichakuregedzi uchidzokera kuRugare ikoko.Mangwana chaiwo ndinoda kuenda newe kunamufundisi wokuchechi kwedu, ndinoziva kuti anobatsira chaizvo varume vanematambudziko akadai. Rega kuzvidya mwoyo mwanangu, izvi ndizvo zvinonzi zviwira vanhu,” chembere yakazopedza kutaura mashoko aya maziso ayo azara misodzi.
Uyuwo Chamu akabva angosimuka, ndokupinda muimba yavakomana yokurara maakasvikotanga kuchema zvinosiririsa. Muupenyu hwake haana kumbofungidzira kuti mudzimai wake Rhoda aigona kuzomushungurudza zvakadzama kudai.